Home » Lahatsoratra farany farany » Hotels & Resorts » Ahoana ny Suite ao amin'ny Sandals Luxury Resorts
Antigua & Barbuda Breaking News • Vaovao Mafana Bahamas • Vaovao Mafana Barbados • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Karaiba • culinary • Vaovao Mafana Curacao • Grenada Breaking News • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao Mafana Jamaika • Vaovao lafo vidy • Vaovao • Resorts • Tantaram-pitiavana tantaram-pitiavana tantaram-pitiavana • Vaovao Mafana Saint Lucia • Tourism • Fifanarahana Travel | Torohevitra momba ny dia • Fanavaozana ny tanjon'ny dia
Tsy misy trano fandraisam-bahiny misy ifandraisany rehetra mandray ny efitranony sy ny suite misy azy ireo toy ny Sandals Resorts. Nieritreritra ny zava-drehetra izy ireo mba hahatonga ny tranon'ny vahiny fialan-tsasatra nofinofy. Voahodidin'ny fampiononana tsy marim-pototra sy ny rendrarendran'izao tontolo izao, mety ho sahirana ny mpitsidika amin'ny fanapahana izay mitovy amin'ny paradisa bebe kokoa, ireo efitrano sy efitrano fividianana olona na torapasika Caribbean.
Ao amin'ny Sandals Resorts, ireo mpitsidika dia hiditra ao amin'ny efitrano faran'izay tsara indrindra sy mampiavaka an'i Karaiba atolotra.
Sandals Resorts dia fantatra amin'ny famolavolana suite 5-kintana tokana indrindra eto an-tany.
Raha ny tenin'ilay mpilalao sarimihetsika sady mpanao hatsikana Jackie Gleason, fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe "Ilay Lehibe", ao Sandals, mora ho an'ny vahiny ny miteny hoe:
Ireo suite tsy manam-paharoa an'ny Sandal Resorts rehetra tafiditra manolora fomba miavaka maro hiaina tontolo tsy miankina amin'ny tantaram-pitiavana sy fialan-tsasatra. Hatramin'ny toeram-pialokalofana an-tampon'ny bluff sy ny efitrano fisidinan'ny lanitra tsy miankina mankany amin'ny efitrano fivahinianana hafahafa na fialan-tsasatra, dia misy famoriam-bola mbola tsy nisy toa azy. Ny suite sasany aza dia misitraka ilay tombontsoa ho simba tanteraka amin'ny mpitondra kapoaka manokana nampiofanin'ny Guild of Professional English Butlers mba hahafahan'ny vahiny miaina ny nofinofiny ao amin'ny toeram-pivarotana natao ho an'ny fitiavana.
FIKAMBANAN'NY SUITE SANDALS LUITEURY
Ny romance dia miakatra amin'ny haavo vaovao ao amin'ny SkyPool Suites. Sokafy ny varavaran'ny efitrano fandraisam-bahiny mba hanehoana dobo filomanosana tsy manam-petra izay mifangaro milamina amin'ny faravodilanitra lavitra. Ny taila mozika mosaikika dia maka tahaka ny lanitra, fa ny vato haran-dranomasina manodidina kosa dia mitondra azy miverina amin'ny tany indray. Na miala amin'ny efitrano fandraisam-bahiny mankany amin'ny terrasika izay misy Tranquility Soaking Tub manome fialam-boly mahafinaritra mahafinaritra.
Toeram-pisakafoanana ivelan'ny rano
Ny efitrano fitrandrahana voalohany any Karaiba dia manova ny lalao tafiditra rehetra. Mandehandeha eny ambonin'ny ranomasina turquoise, ireo trano fisainana vaovao ireo dia misy gorodona fitaratra azo zahana amin'ny fizahana ny ranomasina, Tranquility Soaking Tub, toerana fandriana amoron-dranomasina mihoatra ny rano ho an'ny roa, dobo tsy manam-petra tsy miankina ary serivisy fitehirizana manokana.
Manambatra ny fanatsarana ao anaty sy ny glamor ivelany, ireo suite ireo dia tandindon'ny rendrarendra Sandals. Ny Millionaire Suites at Sandals St. Lucia dia miorina amin'ny tampon'ilay toeram-pialantsasatra, ary samy manana ny fomba fijeriny 180 degre ny fahitana ny ranomasina tsara indrindra ao amin'ny nosy ary misy dobo filomanosana tsy misy fidirana miaraka amin'ny riandrano sy tadio. Ny Millionaire Suites ao Sandals Negril dia manolotra haitraitra mitokana, ao anatin'izany ny patio manokana misy pisinina.
Suites Suites Rondoval amoron-dranomasina
Miorina eo amoron'ny rano, ny amoron-dranomasina Rondovals dia rakotry ny tontolo iainana Zen izay voahodidin'ny hatsarana voajanahary mahagaga. Dingana vitsivitsy monja avy eny amoron-dranomasina - ary misy eo amboniny - ireo efitrano faran'izay tsara ireo no fialofana tonga lafatra amin'ny fankalazana ny fitiavana izay maharitra mandrakizay.
Ny rendrarendra sy ny tantaram-pitiavana, ny Rondovals hafahafa, ny suite ao amin'ny manodidina, dia manodidina ny vahiny amin'ny filaminan'ny maoderina sy ny filaminana milamina. Dingana vitsivitsy miala ny morontsiraka, tafiditra ao anaty zaridaina miafina, ireo valin-drihana romantika ireo dia misy valindrihana conical 20 ′, patio zaridaina akaiky, dobo manokana, fanaka mahogany ary serivisy fitaterana manokana.
Inona no mety tsy manam-paharoa kokoa noho ny filomanosana mankany amin'ny efitrano malalaky ny tenany manokana? Ny Swim-up Suites of Sandals dia manome haitraitra feno amin'ny alàlan'ny fanaka manankarena sy ny antsipirihany be dia be. Ny drafi-kevitra maoderina sy misokatra dia mikoriana mora foana avy amin'ny patio manokana mankany amin'ny sehatra fidirana aotra eo amoron'ny kamory farihy mikoriana moramora.
Fa andraso, mbola misy hafa
Eny, misy efitrano fandraisam-bahiny mahafinaritra kokoa hanintonana sy hanatanterahana ny fanirian'ny rehetra, toa ny Romeo & Juliet Suites, Private Plunge Pool Suites, Two-Story Suites, Crystal Lagoon Suites, Villa Suites, ary Love Nest Butler Suites. Alao sary an-tsaina ireo mpivaro-tena efa za-draharaha izay manome fahafaham-po ny vahiny isaky ny efitrano ambony. Na iza na iza voafidy, ho hitan'ny mpitsidika ny fomba "suite" hijanonany ao amin'ny Sandals Resorts.